Dadka duugta ka qaybgala oo soo yaraaday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dadka duugta ka qaybgala oo soo yaraaday
La daabacay fredag 12 juli 2013 kl 17.45
Sawirle: Kerstin Rassner Flickr
Marka laga soo bilaabo dhammaadkii siddeetameeyadii waxaa boqolkiiba konton hoos u dhacay dadka ka qaybqaata kulanka duugta. Sidaasna waxaa muujiyey tirakoob ay idaacadda Ekot ka heshay ururweynaha shirkadaha qabuuraha oo loo soo gaabiyo SBF.
Dhammaadkii siddetameeyadii waxay dadka ka qaybgalaa gaarayeen celceliskii 50, halka ay maanta ka yihiin 25 qof. Waxaa halkaa ka muuqata in sannadkiiba qof isdhimo. Waxaa taas lagu sharrixi karaa in dadku beddelay habka ay u kulmaan marka tacsiyi jirto.
Maanta caadi uma dhacdo in dadku ay wadatagaan duugta qofka meel ka wadashaqeeyaan, ayuu Christian Richette oo ka hawlgala matxafka Nordiska museet oo ah ruux si gaar ah ula socda isbeddelada ka dhacda xaalada la xiriira dhimashada iyo tuugta.
- Sidaas ayaan u arkaa, waayo sidii hore dadku isuguma dhowa, ayuu raaciyey Christian Richette.